Tsipy kanetibe – «Mondial 2016» : tafapetraka ny komity mpandrindra | NewsMada
Tsipy kanetibe – «Mondial 2016» : tafapetraka ny komity mpandrindra
Ao anatin’ny fanomanana sy fikarakarana ny fandraisana ny “Mondial 2016”, amin’ny taranja tsipy kanetibe ankehitriny ny federasioana sy ny fitondram-panjakana. Tafatsangana ankehitriny ny komity mpandrindra sy ny mpanomana ity fihaonam-be eran-tany amin’ny kanetibe ity.
Taorian’ny fankatoavan’ny federasiona iraisam-pirenen’ny tsipy kanetibe, an’i Madagasikara handray ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, tafatsangana omaly, ny komity mpikarakara, tarihin’ny dokotera, Andriambelosoa Heriniaina. Hisahana ny fampitaovana kosa ny jeneraly Razafindrabesa ary Goulzaraly Danis, ny fitantanam-bola.
Takian’ny federasiona iraisam-pirenena, amin’ny alalan’ny filohany, Claude Azema fa tsy maintsy eo ambany fiahian’ny komity mpandrindra ny fikarakarana ity fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ity. Tsiahivina fa ny 1 ka hatramin’ny 4 desambra ho avy izao, no hanaovana io fihaonana io, izay nomarihin’Andriambelosoa Heriniaina fa nosafidiana manokana io daty io, noho ny fisian’ny fivoriamben’ny «Francophonie», izay hahatongavan’ireo vahiny maro eto Madagasikara.
Ireo mandrafitra ny komity mpandrindra :
-Claude Jean, tale jeneralin’ny fanatanjahantena sy Rakotoarimanga Eric, tale jeneralin’ny Tafita, misolotena ny governemanta.
-Rakotoarivony Jean-Pierre, talen’ny kabinetran’ny kaominina Antananarivo Renivohitra, misolotena ny tanàna mpampiantrano.
-Razafindrabe Jean Luc, solotenan’ny federasiona iraisam-pirenena
-Razafindrainony Béryl, filohan’ny federasiona malagasin’ny tsipy kanetibe
-Rakotomalala Anita, solotenan’ny orinasa mpanohana
-Rabezandrina Hasina, solotenan’ny komitim-pirenena mikarakara ny «Francophonie»
-Razafindrabe Alain, solotenan’ny orinasa miandraikitra ny serasera.